Inona no atao hoe convection (toetr'andro)?
Ny fitomboan'ny hafanana dia miteraka anjara amin'ny rivotra mitsoka
Ny Convection dia teny iray izay henoinareo matetika amin'ny meteorology. Amin'ny toetrandro, dia mamaritra ny fifindran'ny hafanana sy ny fahantrana ao amin'ny rivotra izy , matetika avy any amin'ny faritra mafana (ny haavony) mankany amin'ny iray mafana kokoa (aloft).
Na dia ampiasaina amin'ny "tafio-drivotra" aza ny teny hoe "convection" indraindray, dia tadidio fa ny oram-baratra dia karazana fampivoarana iray ihany!
Avy any amin'ny Kitchen ianao mankany amin'ny Air
Alohan'ny hialantsika amin'ny fampivoarana ny atmosfera, andeha hojerentsika ny ohatra iray mety ho fantatrao kokoa-ranom-boasidinan'ny rano.
Rehefa ritra ny rano dia mangatsiaka ny rano mangatsiaka ao amin'ny faran'ny vilany ka miteraka blasfesin'ny rano mafana ary indraindray mihodina eny ambony. Toy izany ihany koa amin'ny fifandimbiasana amin'ny rivotra raha toa ka manolo ny rano ny rivotra.
Dingana mankany amin'ny dingan'ny fifandonana
Ny dingan'ny fifandonana dia manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ary manohy toy izao manaraka izao:
Ny taratra masoandro dia mamely ny tany, manasitrana azy.
Rehefa manamaivana ny mari-pahaizana ny tany, dia manasitrana ny rivotra manalavitra azy amin'ny alalan'ny fitarihana (ny famindrana hafanana avy amin'ny zavatra iray ho an'ny hafa).
Satria ny rindrina tahaka ny fasika, vato sy ravin-kazo dia mihamafana haingana kokoa noho ny tany voakasiky ny rano na ny zavamaniry, ny rivotra eo amin'ny manodidina sy ny manodidina dia manasitrana tsy tambo isaina. Vokatr'izany, ny paosy sasany dia mafana kokoa noho ny hafa.
Ny paosin'ny haingam-pandeha haingana kokoa dia lasa ambany kokoa noho ny rivotra mafana izay manodidina azy ary manomboka mitsangana izy ireo. Ireo tsangambato miakatra na rivotra no antsoina hoe "thermaly". Rehefa mitsangana ny rivotra dia hafanana sy hafanana ho any anaty rivotra. Ny matanjaka kokoa ny fanamafisam-peo, ny matanjaka sy avo kokoa ao anatin'io rivomahery io dia mitatra ny fifandonana. (Izany no mahatonga ny fifandonana dia mazoto indrindra amin'ny lohataona mafana.)
Taorian'ity dingam-pifaneraserana ity dia feno, misy marika maromaro izay mety hitranga, izay samy hafa ny karazana toetrandro. Ny teny hoe "convective" dia matetika ampidirina amin'ny anarany noho ny fifandonana "manomboka mitsambikina" ny fivoaran'izy ireo.
Rehefa mitohy ny fifandonana, dia mafana ny rivotra raha mahatratra ny fanerena ny rivotra ambany izy ary mety hahatratra ny teboka misy ny vovon-drano ao anatin'izany ary mampifangaro sy mamolavola azy (efa fantatrao) ny rahona cumulus eo an-tampony!
Raha misy hafanana be ny rivotra ary mangatsiatsiaka be, dia hitombo hatrany hatrany izany ary ho lasa cumulus na kumulonimbus.
Cumulus, cumulus cumulus, Cumulonimbus, ary Altocumulus Castellanus dia endrika hita rehetra amin'ny konveksionana. Izy ireo koa dia ohatra amin'ny "convection" mahamay "maina" (convection izay mahatonga ny vovon-drano hivoahana amin'ny rivotra mitsoka mba hamorona rahona). Ny fifanoherana mitranga tsy misy ny fanabeazana rahona dia antsoina hoe "maina". (Ohatra ny amin'ny fampandrosoana maina dia ahitana convection izay mitranga amin'ny andro manjavozavo rehefa maina ny rivotra, na ny fifandimbiasana miposaka amin'ny andro mialoha ny fanamafisana ny hafanana mba hamoronana rahona.)
Raha misy oram-batravatra avy amin'ny rahona dia mamoaka ranon-drongony ny rivotra. Mifanohitra amin'ny fisotroan-dronono tsy mifaninana (izay vokatra rehefa miala ny rivotra ny rivotra) dia mitaky ny tsy fandriam-pahalemana, na ny fahafahan'ny rivotra hanohy ny fitomboany. Izy io dia mifandraika amin'ny tselatra, kotroka, ary ny oram-be . (Tsy dia misy firy ny orana noho ny fisondrotry ny rotsak'orana, fa ny ela kosa dia miteraka ny orana.)
Ny rivotra rehetra amin'ny alàlan'ny famokarana dia tokony handanjalanjana amin'ny habetsaky ny rivotra midina any amin'ny toerana hafa.
Rehefa miakatra ny rivotra mafana dia manidina ny rivotra avy any an-toeran-kafa. Tsapantsika izany fihetsika rivotra izany amin'ny rivotra. Ohatra avy amin'ny rivotra mandresy lahatra ny fisian'ny andoha sy ny rivotry ny ranomasina .
Ny Convection dia mitazona antsika mpilatsaka ambadiky ny moron-drano
Ankoatra ny famoronana ireo hetsika voalaza etsy ambony ireo, ny fifandimbiasana dia misy tanjona hafa - dia esorina ny hafanana be loatra avy amin'ny tany. Raha tsy misy azy, dia novaina fa ny hafanan'ny rivotra eo amin'ny tany dia ho eo amin'ny 125 ° F eo ho eo fa tsy ny 59 ° F.
Oviana no miato ny fifandonana?
Rehefa tsy mihamitombo ny paosin'ny hafanana, ny rivotra mitsingevana amin'ny hafanan'ny rivotra manodidina azy.
Radiation in Space: Inona no azony ampianarina antsika momba an'izao tontolo izao?
Mamoy ny lanitra matevina sy ny kintana
Ny fiheveran-tena ho an'ny biôlôjia sy ny sifikso: hem- na hemo- na hemato-
Ny dina ofisialin'ny fanjakana sy ny fôsily
Iza no nanamboatra teleskaopy?
Inona no fahasamihafana eo amin'ny lanjany sy ny fahamarinanao?
Ny fiheveran-tena biology sy ny suffixes: ect- na ecto-
Five Astro-Hevi-diso momba ny Space
Ny mahaliana momba ny ra
Fampidirana ny Lalàna Lehibe
Fananana metaly - Famaritana, fananana, ary ohatra
Vietnam War: Jeneraly William Westmoreland
Inona no atao hoe monosyllable?
Ahoana no niheverana ny Miles Miles?
Fahagagana ary ny Wiccans
Fanentanana manokan'ny mpianatra ho an'ny lehibe
Foiben'ny tetikasa momba ny Siansa momba ny Siansa: Clouds
Famaritana anarana Scottish - dikany & niaviana
Allemaina ho an'ny mpangataka: mangataka toro-lalana
Fampiatoana any amin'ny Oniversiten'i Dakota Atsimo
Inona no vondron'ny mpandinika?
Ampiasao ny voambolana amin'ny ankapobeny - Plan ESL lesona
Ahoana no hanoratanao ny fanambarana amin'ny ray aman-dreninao rehefa ampiharina amin'ny sekoly tsy miankina?
Inona no atao hoe herisetra?
Inona no atao hoe mpahay siansa?
Fifalian'ny vehivavy Silamo
Revolisiona Amerikana: Battle of Monmouth
Obama manazava ny "fandàvana" hiarahaba ny Flag ao amin'ny Viral Hoax
Ny gazety 100 dia mahita fa ny H-1B sy ny mpiray tanindrazana
3 Fampihetseham-po amin'ny lamosina
Ireo karazana fitiavana efatra ao amin'ny Baiboly
20 Mahatsiaro mahasoa afaka mahatsapa tsara ny hoe mihomehy ianao